Izinto ezi-5 okufanele uzigweme lapho ulungisa futhi uhlanza ibhayisikili lakho - ULLER
Imvamisa, amabhayisikili alahlekelwa ukusebenza kwawo kahle nokusimama ngokuhamba kwesikhathi uma enganakekelwa kahle. Amasondo, iketanga, amabhuleki, i-chassis ... zonke lezi zinto ziyaguga ngokusetshenziswa kwebhayisikili futhi kunamaphutha ajwayelekile kakhulu azodala ukuthi ukusebenza kwebhayisikili kwehle ngokushesha okukhulu.
Eposini lanamuhla sithola amaphutha ama-5 amakhulu avame ukwenziwa ekunakekelweni noma ekugcineni kwebhayisikili. Hlala uzitholele uma ufuna ukugcina eyakho iqinile naphezu kokuhamba kwesikhathi.
1. Gwema ukugeza ibhayisikili lakho ngamanzi anomfutho ophakeme nemikhiqizo enolaka
Njengoba ibhayisikili lakho lingcolile nje, gwema ukuligeza ngamanzi aqine kakhulu ukuvimbela ukusebenza kokuthwala kungashintshwa. Thatha indwangu enomswakama noma indwangu engenzima kangako nensipho engathathi hlangothi namanzi ukuyihlanza ngobumnene ingaphezulu layo ukuze ingalimazi ukuphela kwayo. Uma ukhetha, ungasebenzisa futhi ipayipi ukunciphisa ingcindezi yamanzi ibe ubuncane.
Ngaphezu kwengcindezi yamanzi, imikhiqizo enolaka kakhulu iqukethe izinto zamakhemikhali ezingaphakamisa wonke upende ebhayisikili lakho futhi zidale umonakalo wangempela kuwo. Impela ufuna ukuthi ibhayisikili lakho ligcine upende walo, uqedile futhi ungokwemvelo usesimweni esihle iminyaka eminingi, ngakho-ke, gwema umsebenzi omubi wokuhlanza ukuze ukwazi ukukuphelezela isikhathi eside ngangokunokwenzeka ngaphandle kokushintsha ezinye izingxenye zawo.
2. Gwema ukuqinisa amabhawodi namantongomane ebhayisikili
Kukhona inkolelo yokuthi ukuqinisa amabhawodi webhayisikili ngamandla amakhulu kuzoqinisekisa ukuzinza okukhulu nokumelana. Akukho okungaba kude neqiniso; ukuqinisa amantongomane namabhawodi webhayisikili lakho kuzothinta kuphela ukuphepha kwebhayisikili. Amanye amantongomane ebhayisikili adinga ingcindezi ethize namandla ukuze asebenze kahle. Uma ziqiniswe kakhulu, ubumnandi bazo bungagcina bulimaze uhlaka lwebhayisikili. Ngaphezu kokufaka engozini yokuthi izakhi ezithile zebhayisikili lakho ziba nokulahleka kokusebenza kahle, futhi uzibeka engcupheni yokungakwazi ukukhulula lezo zikulufo futhi ngokuhamba kwesikhathi.
3. Gwema ukugcoba uchungechunge lwebhayisikili lakho ngaphandle kokulihlanza kuqala
Iphutha elijwayelekile futhi eliyingozi kakhulu ekusebenzeni kwebhayisikili lakho ukugcoba iketanga ngaphambi kokulihlanza.
Yize kubalulekile ukugcoba uchungechunge lwebhayisikili ukukuvikela ukuthi lingawi, kuyadingeka futhi ukuligcina lihlanzekile kakhulu ukuze izingxenye zomkhiqizo zisebenze kahle. Kwesinye isikhathi kunokuthambekela kokucabanga ukuthi imikhiqizo egcobisa amaketanga isivele isusa ukungcola kubo ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa insipho engathathi hlangothi phambilini kanti leli iphutha elikhulu. Imikhiqizo esetshenziselwa ukugcoba uchungechunge lwebhayisikili lakho izolivimba ukuthi lome futhi ama-rollers ashayisane namapuleti afanayo, kodwa akunakwenzeka ukuthi ahlanze izinsalela zokungcola okukuzo.
4. Ungagcini ibhayisikili lingcolile
Uma usebenzisa ibhayisikili ezimweni ezimanzi noma ezingcolile, kubalulekile ukususa udaka nokungcola ebhayisikili ukuvimbela lokhu ekungeneni kokudluliswa nohlaka lwebhayisikili. Uma isikhathi eside ibhayisikili ligcinwa lingcolile, inqubo yokuhlanza iyoba nzima kakhulu, futhi njengoba sesibonile ephuzwini lesibili, ukusebenzisa ingcindezi yamanzi kabi ukususa amabala ebhayisikili kulimaza ukusebenza nokubukeka kwebhayisikili. Ngale ndlela, zama ukuhlanza ukungcola okuvela ebhayisikili lakho ngokushesha nje lapho uphuma emzileni wakho. Futhi, ngaphezu kokuvimbela izingxenye lapho izinsalela eziningi ziqongelela ekuwohlokeni, kuzoba lula kakhulu ukuthi uzihlanze ngamandla.
5. Ukukhohlwa ukushintsha amathayi ebhayisikili
Njengakumarimu emoto, amasondo ebhayisikili axwayisa ngokugqoka kwawo ngomsele noma imbobo encane emarimu awo anyamalala lapho ukusetshenziswa kwebhayisikili kukhula kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ibhayisikili lakho alinayo le mijelo ekhombisa ukuwohloka kwamathayi, mane ubabheke ngezikhathi ezithile ukuze uhlole ukuthi awanayo yini indawo ecija amabhuleki. Ngalesi sikhathi esiqondile kulapho kudingeka khona ukushintsha amathayi afanayo bese uwafaka amasha.
Umcabango wokuthi amathayi amabhayisikili ahlala unomphela uvame kakhulu phakathi kwabagibeli bamabhayisikili abasanda kujoyina lo mdlalo, yingakho kudingekile ukuthi kufundwe imiyalo yomkhiqizi ukugwema ukungajabuli noma izingozi ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuphuma nebhayisikili kuyinto emnandi ngempela uma uthanda ukwenza lesi siyalo. Kodwa-ke, kunokuthile okungathokozelwa njengokuphuma emgwaqweni nomlingani wakho onamasondo amabili: ukulungisa nokugcina ibhayisikili lakho lilihle. Yize kuyinqubo eyisicefe futhi engaguquki, kubalulekile ukuthatha isikhathi sokunakekela nokulungisa umonakalo ebhayisikili ukugwema izindleko zangemuva kwesikhathi ezingadingekile nezingozi ezingalindelekile.